HULU ka DVD Mac / Windows - Olee otú Ọkụ Hulu nkiri na DVD maka nkwado ndabere na mpaghara
> Resource> DVD> Olee Ọkụ Hulu Movies ka DVD
Mgbe achọ elu-edu online na tiivi nakwa na fim, mbụ nhọrọ na-abịa n'ime n'uche bụ Hulu. Hulu gbanweworo na online video ọrụ nke na-enye a mma ikiri ahụmahụ. Ekwu okwu nke ị na-elele ahụmahụ, ị ​​mgbe ekere na-ekiri Hulu tiivi nakwa na fim na TV?
Bụghịkwa nwere ike ugbu a na-ekiri Hulu na ha TV na, dị ka Popular Science si Dec. Otú ọ dị, ndabere ọkacha mmasị gị Hulu-egosi-ọkụ Hulu nkiri na DVD nke na-ekiri na TV bụ-enweghị obi abụọ mma nhọrọ. Iji ọkụ hulu nkiri na DVD. ndammana anyị nwere ike ikwu na nke a Hulu ka DVD burner - Wondershare DVD Creator, nke nwere ike inyere gị aka ngwa ngwa tọghata Hulu nkiri na DVD na oké video mma. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, Wondershare DVD Creator for Mac-dịnụ, na-akwado Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6. N'okpuru ebe-abịa zuru ezu ndu.
Part 1 Olee otú iji tọghata Hulu nkiri na DVD
Part 2 Olee otú ibudata Hulu na TV
Nzọụkwụ iji tọghata Hulu ka DVD na ọkụ Hulu ka DVD na Windows na Mac bụ otu. N'ebe a, anyị na-Windows version maka ihe atụ. Free download ya ikpe mbipute ebe a.
Nzọụkwụ 1. Tinye Hulu fim ka usoro ihe omume ma dezie ha na ala
Pịa "Import" ka ịgbakwunye Hulu fim ị ga-amasị ọkụ n'ime DVD Creator. Ịnwere ike ihuchalu videos na nri na hazie videos na utu aha na ekpe. Na wuru na-video nchịkọta akụkọ, ị nwere ike hazie gị vidiyo site cropping, trimming, n'usoro n'usoro, wdg Ugbu a foto importing a na-akwado.
Nzọụkwụ 2. Họrọ a DVD menu n'ihi na gị ahaziri DVD
E nwere 40 free DVD menu ndebiri n'ihi na ị na-ahọrọ. Ị nwere ike họrọ onye na-amasị ma hazie ndị DVD menu thumbnails, ndabere oyiyi, buttons, wdg na-eme ka ọ na ihe ahaziri. Ọ dịghị menu a na-akwado.
Nzọụkwụ 3. Preview na ọkụ Hulu nkiri na DVD
Tupu ị ọkụ nke Hulu nkiri na DVD, ị nwere ike ihuchalu N'ihi nke edezi na Preview taabụ. Mgbe niile bụ OK, na-aga "Ọkụ" taabụ na pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ.
Na ọrụ Wondershare DVD Creator, ị ga-ahụ ya nnọọ mfe iji tọghata hulu nkiri na DVD nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ha gị na ezinụlọ gị n'ụlọ.
Tupu ọkụ Hulu video ka DVD, i kwesịrị ibudata ya na kọmputa gị mbụ. Ebe a, Wondershare Hulu Downloader: AllMyTube na-ukwuu atụ aro ka download Hulu videos ọsọ ọsọ na mfe. Ọ copys ọ bụla Hulu video na ya ukara website ma na-enye ụzọ abụọ ibudata hulu video gị na ntụrụndụ. E wezụga hulu videos, ọ na-akwado nbudata vidiyo si na YouTube, Vimeo, Vevo, Facebook, 100+ video nkekọrịta saịtị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, biko ịmụta ya Mac version: AllMyTube for Mac ime otu ihe ahụ. Ọ bụ na-mkpa ka ya na ị nwekwara ike iji nke a usoro iji tọghata hulu videos gị chọrọ formats na ngwaọrụ.
Nnọọ userful, ọ bụghị ya? Download ya free ikpe na-enweta hassle-free hulu nbudata ugbu a.